यस्ता छन् तरकारीमा भएको चर्को नुन घटाउने अचुक उपायहरु
चैत्र २२, २०७६ | 4th April, 2020
24175 पटक पढिएको
तरकारीमा भएको चर्को नुन घटाउने अचुक उपायहरु । हामी खाना वा रोटीसँग तरकारी खाने गर्छौ । धेरै मिहिनेत गरेर तरकारी अथवा दाल त बनाइन्छ, तर कहिलेकाहिँ भने नुन बढी भएर धेरैलाई चिन्ता हुने गर्छ । नुन बढी भएको तरकारी खान गार्है पर्छ । यस्तै आफ्नो मिहिनेत परेको हुँदा फाल्न पनि त्यति सजिलो हुँदैन । नुन बढी भएको तरकारी र दाललाई के गर्न सकिन्छ ? तरकारीमा नुन चर्को हुँदा के गर्ने ? जान्नुहोस् ! तरकारीमा भएको चर्को नुन घटाउने अचुक उपायहरु यस प्रकार छन् ।
एकैसाथ खान नहुने यी दुई फल तथा तरकारीहरु
गर्मीको समयमा यी तरकारीहरु प्रयोग नगर्नुहोला
घरघरमा खाद्य सामग्री
कालीगण्डकीद्वारा राहत सामग्री वितरण
बजारमा खाद्यान्न अभाव नहुने : प्रजिअ पौडेल
पाकिस्तानमा कोरोनाबाट सङ्क्रमितको संख्या नाघ्यो २७००
भारतका २ अस्पताललाई कोरोना अस्पताल बनाइयो
आगलागी हुँदा ४ घर जलेर नष्ट
नेपालमा कोरोना संक्रमितवाट दोस्रोमा सर्यो पहिलोपटक